Dzidzai Ngozi dzeKutengeserana Kwakaitika Kare | FXCC Njodzi Kuzivisa
musha / About / 24 / 5 SUPPORT / Njodzi Yokuzivisa
Mutevedzeri haafaniri kupinda mune imwe nzira yekutsinhanisa zvakananga kana kuti zvisina kukodzera muChechi Instruments kunze kwekuti iye achiziva uye anonzwisisa njodzi dzinobatanidzwa kune imwe neimwe yeMari Instrument. Saka, vasati vakumbira kambani Mutevedzeri anofanirwa kunyatsofungisisa kana kuisa mune imwe mari yeChechi yeMari yakakodzera kwaari maererano nemamiriro ake ezvinhu uye mari.
Muteereri anonyeverwa nezvezviitiko zvinotevera:
Ikambani haiti uye haigoni kuvimbiswa kutanga kwekodhiyo yekodhipoti yemu Client kana kukosha kwayo panguva ipi zvayo kana mari ipi zvayo inotengeswa mune chero zvigadzirwa zvemari.
Mutevedzeri anofanira kubvuma kuti, zvisinei chero ruzivo rupi zvarwo runogona kupiwa neKambani, kukosha kwekutsvaga kupi kweMari yeChechi kunogona kuchinja zvichidzika zvichidzika zvichienda mberi uye zvinogona kunge zvichiita kuti mari inogona kuve isina kukosha.
Mutevedzeri anofanira kubvuma kuti anopinza dambudziko guru rekukanganisa kurasikirwa nekukuvadza semugumisiro wekutenga uye / kana kutengeswa kweChinhu chipi nechipi cheMari uye anobvuma kuti anoda kuita dambudziko iri.
Ruzivo rwebasa rakapera reChechi yeMari haritauri kuti iripo uye / kana ramangwana rinoitwa. Kushandiswa kwemashoko ezvakaitika kare hakuiti kusungirirwa kana kuchengetedzwa kwakachengeteka sekuenzanisa kwemazuva ano kweChechi Chekushandisa iyo inotaurwa nezvayo.
Mutevedzeri uyu anopiwa zano rokuti kutengesa kunoitwa kuburikidza nemabasa ekutengeserana kwekambani inogona kunge yakagadziriswa. Kurasikirwa kukuru kunogona kuitika munguva pfupi, kuenzanisa mari yose inoshandiswa neKambani.
Zvimwe Zvemari Zvishandiso zvinogona kunge zvisingaiti pakarepo mvura semugumisiro, muenzaniso wekutsvaga kwekutsvaga uye Mutengi angasave akakwanisa kuzvitengesa kana nyore nyore kuwana ruzivo pamusoro pekukosha kweMari yeChechi yeMafungiro kana kuti yakawanda yehutano hunobatanidzwa
Apo imwe Nhepfenyuro yeMari inotengeswa mune imwe mari kunze kweiyo mari yeNyika yeMuteereri wekugara, chero shanduko mumashandisirwo ekushandurudza angave nemigumisiro yakaipa pakukosha kwayo, mutengo nekushanda.
A Chirongwa Chemari pamisika yekunze kune dzimwe nyika inogona kuisa njodzi dzakasiyana nematambudziko anowanzoitika emisika mumunyika yeMutengi wekugara. Mune zvimwe zviitiko, njodzi idzi dzinogona kuva dzakawanda. Tarisiro yebatsiro kana kurasikirwa kubva kunekutengeserana kune dzimwe nyika inoshandiswawo inoshandiswa nekushandurwa kwehuwandu hwekuchinja.
A Derivative Financial Instrument (kureva sarudzo, ramangwana, mberi, kuparadzanisa, CFD, NDF) inogona kunge isina kubhadhara nzvimbo yekutengesa nzvimbo iyo inopa mukana wekuita purogiramu pakuchinja kwemari yemari, mutengo, misika yemabhizimisi kana mari dzekugovera dzinonzi chimbo chepasi . Kukosha kweDerivative Financial Instrument kunogona kukanganiswa zvakananga nemutengo wekuchengetedza kana chero imwe yezviridzwa zvinoshandiswa.
Nhamba dzekutengeserana / misika dzinogona kunge dzisingatauriki. Mitengo yeDerivative Financial Instruments, kusanganisira CFDs, uye inowanikwa zvinhu uye maIndesheni inogona kuchinja zvishoma uye zvakapararira uye inogona kuratidzira zviitiko zvisingaoneki kana kuchinja mumamiriro ezvinhu, hapana chimwe chezvinhu chinogona kudzorwa neMutengi kana Kambani.
Mitengo yeCFD ichakurudzirwa, pakati pezvimwe zvinhu, kuchinja hurumende nehutano, hurumende, zvekurima, yebhizimisi uye yezvokutengeserana mapurogiramu nemitemo, yenyika uye yezvematongerwo enyika ezvematongerwe enyika uye zvezvematongerwe enyika uye mafungiro emagariro anowanikwa munzvimbo inoenderana nemusika.
Mutevedzeri haafaniri kutenga Derivative Financial Instrument kunze kwekuti achida kuita njodzi dzekurasikirwa zvachose mari yose yaakapa uyewo mamwe mapato emamwe uye mamwe emari anotengesa.
Pasi pemamwe marongerwo emakambani zvinogona kunge zvakaoma kana zvisingaiti kuita chirongwa
Kuisa Mitemo Yekurasikirwa Inoshumira kunogadzirisa kurasikirwa kwako. Zvisinei, pasi pemamwe marongerwo emitemo, kutevedzwa kweA Stop Loss Order kungave kwakaipisisa kudarika mutengo wakatarwa uye kurasikirwa kwakakwana kunogona kuve kwakakura kudarika kutarisirwa.
Nzvimbo iyo inofanira kunge isina kukwana kuti ibate nzvimbo dziripo dzakasununguka, iwe unogona kudanwa kuti uise mari yakawedzerwa muchiitiko chechinyorwa kana kuti kuderedzwa. Kusakwanisa kuita saizvozvo panguva inenge yakakodzera kungaita kuti kuregererwa kwemahofisi ekurasikirwa uye iwe uchange uine mhosva kune chero chinokonzera kukanganisa.
Bhengi kana Broker kuburikidza nekambani inobatanidzwa nekambani inogona kuva nezvido zvinopesana nezvinodiwa zvako.
Iko kusungirirwa kwekambani kana yeBhanki kana Broker yakashandiswa nekambani kuti iite zvairi kutengesa kunogona kutungamirira kuti nzvimbo dzako dzivhare kunze kwezvaunoda.
Iyo Muteereri anonyatsoteererwa kune mari inoshandiswa zvakatengeswa zvisiri izvo kana kuti nguva dzose zvokuti haigoni kunyatsoziva kuti mutengo uchanyorwa panguva dzose kana kuti zvingave zvakaoma kuita mitsara pamutengo unogona kutaurwa nekuda kwekusabatwa kwekambani sangano.
Kutengesa pa-line, zvisinei kuti zviri nyore sei kana zvakajeka, hazvirevi kuderedza ngozi dzinobatanidzwa nekutengesa mari
Pane mungozi yekutengesa kweMutevedzeri weChechi yeChechi kunogona kuva kana kuve pasi pemutero uye / kana chimwe chebasa pamuenzaniso nekuda kwekuchinja mumutemo kana mamiriro ake ega. Ikambani haina kubvumidza kuti hapana mutero uye / kana chimwe chebasa rekusimudza richabhadharwa. Mutevedzeri anofanira kunge ane mutoro wemitero uye / kana chimwe chebasa rinogona kuwedzerwa maererano nemabasa ake.
Pamberi Mutevedzeri anotanga kutengesa, anofanira kuwana zvinyorwa zvemishandirapamwe uye nezvimwe zvikwereti izvo Muteereri achabhadhara. Kana zvikwereti zvipi zvisingatauri nemashoko emari (asi somuenzaniso sekupararira kupararira), Mutengi anofanira kukumbira tsanangudzo yakanyorwa, kusanganisira mienzaniso yakakodzera, kuti aone kuti zvikwereti zvakadaro zvingareva sei mune mamwe mazwi emari
Ikambani haisi kupa Mutevedzeri mazano ekutsvaga nezvekutsvaga nezvekutsvaga kwekutsvaga kana kushandiswa kunogona kuiswa muzvikwereti kana kuita mazano ekutsvaga kwekutsvaga kwemarudzi ose
Kambani inogona kudiwa kuchengetedza mari yeMutengi mune imwe nhoroondo yakakonzerwa kubva kune vamwe vatengi uye mari yekambani maererano nemitemo yezvino, asi izvi zvingasakwanisi kuchengetedza zvakakwana
Kutengeserana pamusoro peInternet Trading Platform kune ngozi
Kana Mutengi achiita zvekutengeserana pamagetsi ehurumende, acharatidzwa pachena kune njodzi dzinosangana nehurongwa huno kusanganisira hardware ne software (Internet / Servers). Chigumisiro chekukanganiswa kwehurongwa chero kupi zvingave kuti kurongeka kwake hakuiti kuenderana maererano nemirayiridzo yake kana kuti hazviiti zvachose. Ikambani haibvumi chero mhaka pakuderera kwakadaro
Kukurukurirana kwefoni kunogona kutonyorwa, uye iwe uchabvuma zvinyorwa zvakadaro sechapupu hunogumisa uye hunopikisa yemirayiridzo
Ichi chiziviso hachigone uye hachizivise kana kutsanangura zvose zvengozi nezvimwe zvinhu zvinokosha zvakabatanidzwa mukushanda mune yese yeMari Instrument nemari yekutsinhanisa